‘देउवाको सय दिनमा तीन महिना त षड्यन्त्रमा बित्यो’ : डा. सुन्दरमणि दिक्षित (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, ३ कार्तिक । नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले नेपालका सबै दलका नेताहरु फेल भएको टिप्पणी गरेका छन् । नेताहरु असफल भएकै कारण आज आम मानिसले राजा आउ भन्ने नारा लगाउन थालेको उनको भनाई छ ।